कराते खेल सबैका लागि बहुउपयोगी छ : कराते प्रशिक्षक हरिबहादुर थापा – Nepal Parikrama
कराते खेल सबैका लागि बहुउपयोगी छ : कराते प्रशिक्षक हरिबहादुर थापा
हरिबहादुर थापा मगर, सोतोकान कराते विद्यामा एक परिचित नाम हो । कराते खेलमा झण्डै २२ बर्षदेखि सक्रिय थापा हाल नेपाल सोतोकान कराते संघको केन्द्रीय सचिव समेत रहनुभएको छ भने २०५६ सालदेखि माहंकाल कराते प्रतिष्ठानमा प्रमुख प्रशिक्षको रूपमा कार्य गर्दै आउनुभएको छ । प्रतिष्ठान स्थापना कालको समयमा थापा स्वयम प्रतिष्ठानको अध्यक्ष समेत रहनुभएको थियो ।
शिक्षा क्षेत्रसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका थापाले विद्यालयमा कराते खेलको विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । अहिले माहंकाल कराते प्रतिष्ठानसँग मात्र ४१ वटा विद्यालय आवद्ध छन् । सिफल कराते डो प्रतिष्ठानका समेत अध्यक्ष रहनुभएका थापाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगीतामा सहभागी भएर स्वर्ण, रजत र कास्य पदक समेत हासिल गर्नुभएको छ । त्यसैगरी, थापा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगीतामा पनि धेरै पटक रेफ्री र प्रशिक्षकको रूपमा सहभागी भइसक्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगीतमा निर्णायको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ।
अहिले पनि कराते खेलमा सक्रिय रहनुभएका थापासँग हामीले नेपालमा कराते खेलको वर्तमान अवस्था, चूनौती र भविष्यका बारेमा कुरा गरेका थियौं । नेपाल परिक्रमा सम्बाददाताले उहाँसँग गरेको कुराकानी अंश ।
–कसरी कराते खेलसँग आवद्ध हुनुभयो ?
कराते खेलमा मेरो बच्चादेखि नै आर्कषण थियो । कराते खेलप्रतिको यहि आर्कषणका कारणले पनि म यस क्षेत्रसँग आवद्ध भएको हुँ । कराते खेलमा जो कोही व्यक्ति आवद्ध हुन सक्छ । कराते कुनै पनि खेलको लागि पहिलो आधारभूत कुरा हो । शारिरक तन्दुरूस्तीका लागि कराते खेल अति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ । मानिस स्वस्थ्य रहन होस् या शरिरलाई चलायमान र फूर्तिलो बनाउन कराते खेल अति नै उपयुक्त छ । त्यसैले मैले आफ्नो जीवन नै यही खेलसँग समर्पण गर्ने हेतुले आफूलाई यस खेलसँग आवद्ध गरेको हुँ ।
–कहिलेदेखि कराते खेलमा लाग्नुभयो ?
म बाल्यकालदेखि नै कराते खेलसँग आवद्ध छु । आठ बर्षको उमेर देखि नै मैले कराते खेल्न शुरू गरेको थिए । मैले १६ बर्षको उमेरमै ब्लाक बेल्ड पाएको हुँ ।
–नेपालमा अहिले कराते खेलको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समय नेपालमा कराते खेलको अवधारणा व्यापक बन्दै गएको छ । अझ निजी विद्यालयको विकास र विस्तार भएपछि विद्यालय स्तरदेखि नै कराते खेलको अवधारणा विकास हुँदै गएको छ । अहिले अधिकांश निजी विद्यालयहरूले कराते प्रशिक्षक नै राख्ने गरेका छन् । करातेका खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीहरूको पनि दिन प्रतिदिन संख्या बढ्दो छ । कराते सम्बन्धी संघ सस्था पनि धेरै भइसकेका छन् । करातेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू पनि हुने भइरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा नेपालमा कराते खेल ब्यापक बन्दै गएको छ ।
–करातेको कुन विद्या नेपालमा बढि प्रचलनमा छ ?
नेपालमा सबैभन्दा बढि प्रचलनमा रहेको करातेको विद्या भनेको सोतोकान कराते हो । नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै सोतोकान कराते बढि प्रचलनमा छ । करातेका अन्य तीन विद्या गोजोरियो, सितोरियो, वादोरियो भन्दा सोतोकान नै बढि लोकप्रिय छ । नेपालमा सोतोकान करातेका खेलाडी र प्रशिक्षक अन्य विद्याका भन्दा बढि छन् ।
कराते खेल किन महत्वपूर्ण मानिन्छ ?
कराते खेल आफैमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्वास्थ्य मानिसको पहिलो गहना हो । स्वस्थ्य तन्दुरूस्त रहन कराते मात्र एउटा त्यस्तो खेल हो जसले शारिरिक अवस्था ठीकसँग राख्न मद्दत गर्छ । मानिस निरोगी र सधै फूर्तिलो रहन कराते खेलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । त्यसैले विश्वब्यापी सन्र्दभमा कराते पनि एक आधारभूत शिक्षा र प्रयोगको रूपमा विकसित भइरहेको छ ।
नेपालमा अहिले कराते खेलका चूनौतीहरू के–के हुन् ?
– राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, अहिले नेपालमा कराते सम्बन्धी संघ सस्था धेरै भइसकेका छन् । यिनीहरूको व्यवस्थापन नै अहिलेको प्रमुख चूनौती बनेको छ । राज्यले यस खेलको विकासमा जति चासो राख्नुपर्ने हो त्यति चासो राखेको पाइदैन । करातेको खेलको विकासका लागि जति प्रयास भएका छन् ति अधिकांश प्रयासहरू करातेलाई माया गर्ने र यस खेलको विकास गर्न चाहनेबाट नै भएको हो । यो एउटा सकरात्मक पक्ष भएपनि पछिल्लो समय करातेको नाममा च्याउ झै उम्रिएका संघ सस्था र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हिसाबले मात्र अघि बढ्न चाहनेलाई एउटा निश्चित मापदण्ड भित्र राख्न जरूरी छ । जुन मापदण्ड सरकारी तवरबाट नै तय गरिनुपर्छ ।
थोरै केही गलत मनसाय बोकेका व्यक्तिका कारण समग्र कराते क्षेत्र धमिलिन दिन हुदैन । अनि अर्को चूनौती वा समस्या भनेको राज्यले कराते खेलका खेलाडी तथा प्रशिक्षको महत्वलाई बुझ्न सकेको छैन । आफ्नालाई काखा अनि अरूलाई पाखा गर्ने प्रवृक्ति अहिले पनि कायमै छ । जसले यस क्षेत्रमा बर्षौ काम गरेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकको मन दुखाउने काम गरेको छ । त्यसैले खेल क्षेत्रमा हुने गलत राजनीतिक संस्कार पनि हट्नुपर्छ ।
–कराते खेलको भविष्य नेपालमा कस्तो छ ?
मैले अघि पनि भनिसके, नेपालमा कराते खेलको अवधारणा व्यापक हुँदै गएको छ । कराते खेलको एउटा महत्वपूर्ण विद्या यसै पनि हो र कुनैपनि खेलको आधारभूत जग भनेको पनि कराते नै हो । त्यसैले कराते खेल नेपालमा अझ विकसित र व्यपाक भएर जान्छ । अन्तर्राट्रिय स्तरमा करातेका भित्रका विभिन्न विद्यामा रहेर प्रतियोगीता हुने भएकाले यो एउटा देशलाई विश्वमै चिनाउने माध्यम पनि हो । आगामी दिनमा कराते खेलको क्षेत्र झन फराकिलो भएर जान्छ ।
–अन्त्यमा नेपाल परिक्रमा मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?
कराते खेल तपाई हामी जो कोहीलाई अति नै उपयोगी छ । स्वस्थ्य रहन, शारिरिक दन्तुरूस्ती कायम राख्न, फूर्तिलो र जागरिलो जीवनयापनका लागि कराते खेलसँग आवद्ध रहनुहोस् भन्न चाहान्छु, धन्यवाद ।
Published On: १७ बैशाख २०७४, आईतवार १२:२५